11 Zvino Zofari muNaama+ akapindura, akati: 2 “Mashoko mazhinji angarega kupindurwa here,Kana kuti munhu anozvirumbidza angava akarurama here? 3 Kutaura kwako kusina zvakunobatsira kungaita kuti vanhu vanyarare here,Uye ucharamba uchingonyomba pasina munhu anokutsiura here?+ 4 Unotiwo, ‘Kurayiridza+ kwangu kwakachena,Uye ndakachena+ pamberi penyu.’ 5 Asi haiwa, kudai Mwari aizotauraOshama miromo yake achitaura newe!+ 6 Aizokuudza zvakavanzika zvouchenjeri,Nokuti zvinhu zvouchenjeri hunobatsira zvizhinji.Waizozivawo kuti Mwari anobvumira kuti zvimwe zvikanganiso zvako zvirege kuyeukwa.+ 7 Ungaziva zvinhu zvakadzama zvaMwari,+Kana kuti ungaziva panogumira Wemasimbaose here? 8 Uchenjeri hwacho hwakakwirira kupfuura denga. Iwe ungaitei?Hwakadzika kupfuura Sheori.+ Iwe ungazivei? 9 Hwakareba kupfuura zvakaita nyika,Uye hwakafara kupfuura gungwa. 10 Kana iye akapfuura, akagamuchidza munhuUye ounganidza dare, ndiani angamudzivisa? 11 Nokuti iye anonyatsoziva vanhu vasiri vechokwadi.+Paanoona zvinhu zvinokuvadza, haangafungisisi nezvazvo here? 12 Kunyange munhu asingafungi achawana njerePanongoberekwa mbizi inenge mbongoro iyo iri munhu. 13 Kana iwe uchizogadzirira mwoyo wakoWotambanudzira zvanza zvako kwaari,+ 14 Kana zvinhu zvinokuvadza zviri muruoko rwako, zviise kure,Uye kusarurama ngakurege kugara mumatende ako. 15 Nokuti uchabva wasimudza chiso chako usina mhosva+Uye uchasimbiswa, uye hauzotyi. 16 Nokuti iwe—uchakanganwa kutambudzika;Uchakuyeuka semvura yakapfuura. 17 Nguva youpenyu+ hwako ichabuda yakajeka kupfuura masikati makuru;Rima richaita semangwanani.+ 18 Iwe uchava nechivimbo nokuti pane tariro iriko;Uchanyatsotarira-tarira—ucharara pasi wakachengeteka.+ 19 Uchazamura, pasina angakudederesa.Vanhu vazhinji vachatsvaka kukufadza;+ 20 Maziso evakaipa achaneta;+Nzvimbo yavo yokutizira ichaparara,+Uye tariro yavo ichava kufa kwomweya.”+